Koorsadani waxaa loogu talagalay dadka, hal sabab ama mid kale, ay tahay inay wax ku bartaan guriga, keligood, oo aan lahayn macallin. Marka hore, waxaan baran doonaa inaan dejino himilooyin waxbarasho oo macquul ah nafteena. Kadib waxaan baran doonaa sida loo qorsheeyo howlaheena isla markaana aan u taxno hababka ugu wax ku oolsan ee kaligaa wax loo barto Kadib, waxaan ku cadaadin doonnaa aqoonteena qorista, xifdinta, shaqada kooxeed, imtixaanada dhaqanka iyo dhaqanka. Waxaa jira 11 kalfadhi oo gaagaaban oo toos ah. Xusuus qor!
Waxaan kuu rajeynayaa tababar wanaagsan!
Sida loo abaabulo waxbarashadaada guriga Diisambar 12, 2020Tranquillus
horeU adeegsiga ficillada faransiiska si wanaagsan
socdaKa hadal dhadhanka iyo hiwaayadaha sida hooyo!
Formula Intensive: Tababar xirfadeed waqti-buuxa ah oo xirfad cusub ah
Ka hadal dhadhanka iyo hiwaayadaha sida hooyo!